आठ धनाढ्यसँग आधा विश्वको सम्पत्ति : १ जनाको सम्पति ५० अर्ब जनसंख्याको बराबर !
विश्वका आठ धनाढ्य पुरूषसँग आधा विश्वको सम्पत्ति छ। तीमध्ये ६ जना फोर्ब्सको विश्वकै धनी सूचीमा परेका अर्बपति छन्। माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्स, बर्कसायर ह्याथवेका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वार्रेन बफेट, एमजनका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेफ बेजोस, ओर्‍याकलका सहसंस्थापक ल्यारी एल्लिसन, न्यूयोर्कका पूर्व मेयर माइकल ब्लुमबर्ग र फेसबुकका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्ग सबै अमेरिकी नागरिक र अर्बपति हुन्। अक्सफामका अनुसार उनीहरूबाहेक मेक्सिकोका टाइकुन कार्लोस स्लिम र स्पेनका एमान्सियो ओर्टेगा पनि छन्। उनीहरू कुल सम्पत्ति चार खर्ब २६ अर्ब अमेरिकी डलर छ। विश्वका ३.६ अर्ब मानिससँग उनीहरू जत्तिको सम्पत्ति छैन। उनीहरू अधिकांश विकासोन्मुख देशमा बस्छन्। अक्सफामको यो तथ्याङ्कले बढ्दो आर्थिक असमानताको चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ। संस्थाले सन् २०१४ देखि आर्थिक असमानताबारे अध्ययन गर्दै आएको छ।
बढ्दै गएको असमानताले लोकतान्त्रिक पद्धतीमा जोखिम बढाउँदैछ। अमेरिकामा धनी र गरिबबीच बढ्दै गएको अन्तरले डोनाल्ड ट्रम्पलाई राष्ट्रपति बन्न सहयोग पुग्यो। युरोपेली संघबाट अलग्गिने संयुक्त अधिराज्यको निर्णय “ब्रेक्जिट” पनि यसैको नतिजा हो। “बढ्दो असमानताले हाम्रो समाजलाई टुक्र्याउँदैछ,” अक्सफामले प्रतिवेदनमा लेखेको छ। ब्रेक्जिट र ट्रम्पको अभियानलाई उद्धृत गर्दै “जातिवादको चिन्ताजनक वृद्धि र मूलधारको राजनीतिमा व्याप्त निराशा” बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०१६ मा विश्वका एक प्रतिशत धनाढ्यहरूसँग पृथ्वीको आधाभन्दा धेरै सम्पत्ति रहेको अक्सफामले उल्लेख गरेको छ। फोर्ब्सको सूचिमा एक हजार आठ सय दश जना अर्बपति छन्। तीमध्ये ८९ प्रतिशत पुरूष छन्। उनीहरूसँग ६५ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको सम्पत्ति छ। यो भनेको ७० प्रतिशत जनसंख्याको सम्पत्ति हो। अक्सफामले फोर्ब्सको अर्बपतिको सूचि र क्रेडिट सुइसको सम्पत्ति तथ्याङ्कको आधारमा यस्तो विश्लेषण गरेको हो। सम्पत्ति तथ्याङ्क अनुसार विश्वका गरिब ८० प्रतिशत अफ्रिका र भारतका वयस्क हुन्। उनीहरू युवा, अविवाहित र कम शिक्षित छन्। अझ कम शिक्षित महिलासँग झनै कम सम्पत्ति छ।
तीमध्ये थोरै अमेरिकामा छन्। सम्पत्ति तथ्याङ्कले व्यक्तिको सम्पत्तिबाट कर्जा घटाएर खुद सम्पत्ति मात्रै हेर्छ। अर्थात् धेरै कर्जा लिएका अमेरिकाका युवाहरू कागजमा गरिब देखिन्छन्। उनीहरूले कार वा विद्यार्थी कर्जा लिएका हुन्छन्। फ्युजनका फेलिक्स साल्मन लगायतका केहि अर्थशास्त्रका लेखहरूले यो बुदाँको आधारमा अक्फामको प्रतिवेदन सहि नभएको तर्क गरेका छन्। अक्सफामको नीति तथा अनुसन्धानका निर्देशक गवेन क्रिप्केले यसलाई स्वीकारेका छन्। यद्यपि प्रतिवेदनको नतिजालाई नजरअन्दाज गर्ने कारण भने नभएको उनले बताए।
कर्जालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा सबैभन्दा धनी ५६ जनाको सम्पत्ति सबैभन्दा गरिब ५० प्रतिशतको सम्पत्ति बराबर हुने अक्सफामको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। “आर्थिक पिरामिडको शीर्ष स्थानमा धनीहरू तीव्र रूपमा अझै धनी हुँदैछन् भने बाँकी जनसंख्या संघर्षरत छ,” क्रिप्केले भने। सबैभन्दा धनी आठ व्यक्तिको सम्पत्ति अविश्वसनीय भएको उनले बताए। पोहोर साल अक्सफामको प्रतिवेदन अनुसार ६२ जना अर्बपतिसँग संसारको आधा सम्पत्ति थियो। क्रेडिट सुइसले तथ्याङ्कको गुणस्तर बढाएकोले यो वर्ष ठूलो परिवर्तन देखिन्छ। यही तथ्याङ्कलाई पोहोर प्रयोग गरेको भए विश्वको आधा जनसंख्याको सम्पत्ति जम्मा ९ जना अर्बपतिसँग हुने क्रिप्केले बताए।
फस्टाउँदो शेयर बजारले पोहोर सालको अन्तर बढाउन आंशिक भूमिका खेलेको थियो। डलरको बढ्दो मुल्यले पनि यसमा योगदान दिएको छ। बढ्दो आर्थिक असन्तुष्टिका कारण ट्रम्पको राजनीतिक सम्पत्तिलाई फाइदा पुगेको छ। उनी फोर्ब्सको अर्बपति सूचिमा ३२४ औं स्थानमा छन्। उनीसँग त्यो स्थानमा स्टार वार्सका जन्मदाता जर्ज लुकास पनि छन्। ट्रम्पले राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाको इतिहासकै सबैभन्दा धनी समूहलाई क्याबिनेटमा मनोनित गरेका छन्। उनीहरूको संयुक्त सम्पत्ति नै १२ अर्ब अमेरिकी डलर भएको ब्लुमबर्गले हालै अनुमान गरेको छ। न त ब्रेक्जिट न ट्रम्पको नीति प्रस्ताव दुवैलाई बढ्दो आर्थिक असमानताको समाधानका रूपमा लिइएको छैन। बढ्दो आर्थिक अन्तरले विपन्नहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुसन्धानहरूले देखाएको छ। मुटु तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्नुका साथै आत्महत्या दर पनि बढ्छ। आयु पनि कम हुन्छ। श्वेत व्यक्तिहरूको मृत्यु दरको वृद्धि र हेरोइनको प्रयोग बढ्नुमा आर्थिक असमानताकै हात भएको केहीको तर्क छ।
विलियम हेनरी "बिल" गेट्स तृतिय (जन्म २८ अक्टुबर १९५५) एक अमेरिकी ब्यापारी, आविष्कारक तथा माइक्रोसफ्ट कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष हुन । उनी विश्वकै दोस्रो धनी व्यक्ति हुन्। उनले ३० वर्षको उमेरमा लखपति बन्ने सपना देखेका थिए तर ३१ वर्षको उमेरमा नै उनी करोडपति बन्न सफल भए। उनि विलियम एच गेट्स सिनियर र मैरी मैक्सवेल गेट्सका छोरा हुन्। उनको पिता एक प्रमुख वकील थिए, र उनको आमाले पहिलो इन्टर्स्टेट ब्यानसिस्टम र युनाइटेड वे को बोर्ड मा सेवा गरे। गेट्स को मातृ हजुरबुवा जे.डब्लु. मैक्सवेल, एक राष्ट्रीय बैंक अध्यक्ष हुन्। गेट्सको एक ठूलो दिदि, क्रिस्टी (क्रिस्टियन्नी) र एक सानो बहिनी, लिब्बी छन्। उनले १३ सालको उमेरमा एक निजी तैयारी विद्यालय, लेक्साइडाइड स्कूल मा दाखिला लिए।उनले आफ्नो पहिलो कम्प्यूटर प्रोग्राम यस मेशिनमा लेखे: टिक-टेक-टाइको कार्यान्वयन जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई कम्प्यूटर विरुद्ध खेल खेल्न अनुमति दिए। गेट्स मेशिन द्वारा मोहित थिए र कसरी सहि सफ्टवेयर कोड लाइ कसरी सधैँ राम्ररी कार्यान्वयन गर्ने सोच थियो। जब त्यो त्यो क्षणमा पछाडि झिकेर, उनले भने, "मेसिनको बारेमा कुनै निट चीज थियो।"
बफेट ओरेकल अफ ओमाहा अर्थात् ओमाहाको सबै भन्दा ठुलो लगानीकर्ताको रुपमा पनि चिनिन्छन । उनले अमरीकाको कोकाकोला, वेल्स फार्गो एण्ड कम्पनी, जिलेट, अमेरिकन एक्प्रेस, प्रोक्टर एण्ड ग्याम्बल, क्राफ्ट फूड्स जस्तो ठुलो कम्पनीहरुमा धेरै लगानी गर्ने गर्थे । यी कम्पनीहरुमा ठुलो स्वामित्व कसैसंग छ भने त्यो वारेन बफेटसंग रहेको छ । अमेरिकी शहर ओमाहाको नेब्रास्कामा ३० अगस्त १९३० मा जन्मिएका वारेन बफेटका पिता शेयर कारोबारी थिए। ११ वर्षको कलिलो उमेरमै बुबासँगै शेयर बजार कारोबारी जीवनको शुरुवात गरे, आफूलाई चाहिने पाकेट खर्च निकालनको लागि पत्रिका पनि बेचे। १३ वर्षको उमेरमा बफेटले पहिलो शेयर प्रतिफल प्राप्त गरे। करिब १५ वर्षको उमेरमा ओपेन हाईस्कूलका साथीहरूसँग मिलेर एक कपाल काट्ने पसलमा पिन बाल मेसिन लगाएर राम्रो पैसा कमाए, त्यो पैसाबाट वारेनले ४० एकडको एक फार्म किने। त्यसपछि वारेनले शेयरमा लगानी गर्न शुरु गरे जसबाट उनले राम्रो प्रतिफल प्राप्त गरे।
अमेरिको हार्वड स्कूलमा पढेका बफेट कोलम्बिया बिजनेस स्कूलमा अध्ययन गरे। उक्त स्कुलमा वारेनले बैन्जामिन ग्रामह र डेविड डाड जस्ता अर्थशास्त्रीबाट शेयर बजारमा लगानी गर्ने सुत्र सिक्ने मौका पाएका थिए। ग्राहमको कम्पनीमा १२ हजार डलर वार्षिक तलब आउने गरी वाफेटले काम शुरु गरेका थिए। सोहीक्रममा उनले सेयर बजार कसरी उकालो ओरालो लाग्छ भन्ने कुराको केही प्राविधिक ज्ञान लिए। सैनीक सेवामा जागिरे बेन्जामिन ग्राहमको कम्पनीमा कार्यरत वाफेटले उनको सेवा निवृति पछि उक्त जागिर छोडे। त्यसपछि उनले आफ्नो पूँजी बजारको चाखलाई मेटाउन बफेट पार्टनरसिप लिमिटेडका रूपमा कम्पनीको स्थापना गरे।
जेफ प्रेस्तन बेजोस (जन्म जनवरी १२; १९६४) एक अमेरिकी प्रविधि उद्यमी,लगानीकर्ता र परोपकारक हुन् । उनी अमेजनको अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । ब्लूमबर्ग बइल्लियनाइर सूचकांक अनुसार उनको सम्पती १५० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुग्यो जुन आधुनिक इतिहासमा सबैलाई उच्चतम हो जसले माइक्रोसफ्टका सह-संस्थापक बिल गेट्सलाई दोस्रो स्थानमा छाड्यो ।
फेसबुक नामक सामाजिक सञ्जाल का परिकल्पनाकार ३३ वर्षीय (सन २०१६ मा) यी अमेरिकी युवा विश्वका सबैभन्दा कम उमेरका अर्बपति हुन्। उनीसँग अहिले नै ७६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति छ। जुन १५० खर्ब नेपाली रूपैयाँभन्दा बढी हो। फेसबुकको लोकप्रियतासँगै उनको यो सम्पत्तिमा पनि वृद्धि हुँदै जानेछ। अहिले फेसबुकमा आफ्नो एकाउन्ट खोल्ने व्यक्तिहरूको संख्या ५० करोड नाघेको छ। विश्वभर एकसाथ १५० करोडभन्दा बढी व्यक्ति यो सोसियल नेटवर्कसँग जोडिएका हुन्छन्। फेसबुकको यही लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै टाइम म्यागाजिनले यो वर्ष मार्कलाई वर्ष व्यक्तित्व २०१०को सम्मान दिएको छ। उक्त म्यागजिनले यति कम उमेरका व्यक्तिलाई यस्तो पद विरलै दिएको छ। यसअघि १९२७मा अमेरिकी विमान चालक चाल्न लिन्डवर्ग तथा १९५२मा बिर्टेनकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई कम उमेरमै वर्ष व्यक्तित्व घोषणा गरिएको थियो। विमान चालक तथा बेलायती महारानी दुवै उक्त सम्मान पाउँदा २६ वर्षका थिए। सन् २००४ मा हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्दागर्दै मार्कले विश्वलाई जोड्ने एउटा सेतु निर्माण गर्ने योजनाका साथ फेसबुकको निर्माण गरेका थिए। केही साथीको सहयोगमा खुलेको यो साइटका लागि काम गर्ने कर्मचारीको संख्या अहिले १ हजार ७ सय छ। सबैभन्दा रमाइलो कुरा यो साइटमा काम गर्ने अधिकांश कर्मचारी उनीभन्दा बढी उमेरका छन्। साइटलाई विवादरहित एवं लोकप्रिय बनाउन जुबेरवर्गले ११ जना विशेषज्ञ राखेका छन्।